Wararkii ugu danbeeyey ee xaaladdaha Puntland (Warbixin). • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Wararkii ugu danbeeyey ee xaaladdaha Puntland (Warbixin).
Wararkii ugu danbeeyey ee xaaladdaha Puntland (Warbixin).
December 25, 2012 - By: Abdirizak Shiino
Ergada ku sugan Garoowe oo shuruudo ku xirtay Xukuumadda.
Maalinimadii shalay Waxaa lagu wargeliyey Ergadii ku sugnayd Magaaladda Garoowe ee halkaas u tegay sidii ay ugu qabsan lahaayeen shir lagaga tashado aayaha Puntland inay mudo 24 saac gudahood ah iskaga baxaan Magaaladda.
Hase yeeshee Ergadii ayaa ku xirtay maanta Xukuumada in loo fuliyo laba shuruudood ka hor inta aysan magaaladda iskaga bixin shuruudahaas oo kala ah:
1. In ay Xukuumadu u keento qoraal ay ku amaryso inay iskaga baxaan Magaaladda halka markii hore hadal ahaan amarka loo siiyey.
2. In Xukuumadu xabsiga ka sii deyso dhamaan xubnihii ka tirsanaa Ergada ee ku xiran Garoowe.
Ilaa & hada Xukuumadu kama soo jawaab celin shuruudahaas ay ku xireen Ergooyinkii ku sugnaaa Garoowe .
Dhanka kale ergada ayaa baaq u direy Isimadu in ay soo dhexgalaan arinta inta aysan faraha ka bixin, iyaga ayaa bud-dhig u ah Puntland waana muhi m in ay doorkooda qaataan ayaa lagu yiri baaq ay soosaareen maanta.
Xukuumadda & Isimada Gobolka Nugaal oo is afgartay.
Sida Horseed ay u xaqiijiyeen ilo xogogaal ah waxaa is afgarad ku soo dhamaaday wada hadalo u socday maalmihii ugu danbeeyey Xukuumadda Puntland & Isimada Gobolka Nugaaal kuwaas oo lagaga hadlayey xaaladaha Siyaasadeed ee wakhtigan ka taagaan Puntland & Shirka Aayo ka talinta oo la qorsheeyey inuu ka dhaco magaaladda Garoowe.
Labada dhinac waxay isku afgarteen sida la xaqiijiyey in Isimada Gobolka Nugaal iskaga baxaan Magaalada Garoowe ilaa laga gaarayo 8 Jan, 2013 ayna wakhtigaas inta ka hartay aadaan tuulooyinka ka baxsan Magaaladda taas oo ugu danbayntii Isimadu aqbaleen.
Xukuumada Puntland ayaa talaabadaas u qaaday si aysan Ergada Garoowe joogtaa ugu ergoon Isimada oo la aaminsanaa inay arrinta faraha la soo geli doonaan Dowladana ku cadaadin doonaan in ay faraha kala baxdo shirka Aayo ka talinta & Ergada faraha badan ee ku sugan Magaaladda Garoowe.
Is afgaradkan ayaa iridaha u soo laabaya rajadii laga qabay in Magaaladda Garoowe uu ka furmo shirkii Aayo ka talinta Puntland & kooxaha ka soo horjeeda mudo kororsiga Madaxweyne Faroole oo aaminsanaa in Isimada Gobolka Nugaal arrinta soo faragelin doonaan .
Dhanka kale Xukuumaddu waxay diidey oo ay sheegtay in ay si kasta uga hortagayso in Isimadu shir ayaha Puntland isugu yimaadaan, taas oo abuurtey rajo xumo dadka doonayey in xalka lagu gaaro wada hadal iyo isu tanaasul.
1 Jan, 2013 Awoodaha Madaxweyne Faroole oo is dhimaya.
Madaxweyne Faroole wuxuu luminayaa inta badan awoodihiisa marka la gaaro 8 jan, 2013
Marka la gaaro 1 Jan, 2013 oo ay ina ka xigaan maalmo kooban waxaa sharciyad beelaya inta badan awoodaha Madaxweynaha wakhtigiisu dhamaadka yahay ee Puntland Cabdiraxmaan Sh. Maxamed Maxamuud (Faroole).
Sida ay dhigayaan shuruucda Puntland Madaxweyne kastaa waxaa uu luminayaa saxiixiisa marka ay 7 cisho (Usbuuc) uga harto mudada xil hayntiisa, awoodaha uu luminayo waxaa ka mid ah:
1. Inuu dalbado kharashaad dheeri ah /aan ku talo gal lahayn marka laga reebo kharaadka hawl socodsiinta oo ah kuwo cayiman.
2. Xilka kama qaadi karo dhamaan saraakiisha Dowladda mana magcaabi karo xilal cusub.
3. Ma dalacsiin karo Saraakiisha Ciidamada.
4. Ma geli karo Heshiisyo cusub .
5. Xukuumadiisu ma samayn karto Qorshayaal cusub (New plan) keliya waxay ku shaqaynaysaa qorshayaasheedii hore.
Waxaa xusid mudan wakhtigii Gen. Cade Muuse uu xilku ka dhamaanayey uuna ku jiray ololaha doorashooyinka 2009 inuu dalacsiiyey saraakiil badan oo ka tirsan laamaha amaanka halka uu xilal u magbaacay saraakiil rayid ah talaabadaas oo ahayd sharci daro.
Markii tartankii doorashooyinka uu ku guulaysatay Madaxweynaha hada xilka haya ee Dr. Faroole wuxuu tirtiray dhamaan wareegtooyinkii ka soo baxay Xafiiska Madaxweyne Cade wakhtigii ololaha doorashooyinka lagu jiray kuwaas oo uu sheegay inay ahaayeen sharci daro.
Magacaabida Maxkamadda Dastuuriga ah
Madaxweynaha Puntland ayaa maalmahan ku mashquulsan in uu sameeyo Maxkmadda Dasuuriga ah ee aan Puntlan loo samayn tan iyo markii la dhisey sidaasna waxaa kula taliyey kooxda ka agdhaw ee kala talisa arrimaha murugsan ee Puntland ka jira, Horseed ayaa ka ogaatey samaynta maxkmadda Dasuuriga ah mid kamid ah hawlwadeenada Madaxtooyada kaas oo ka gaabsadey in aan magiciisa xigano, waxa uu sheegay in loo magacaabayo booskaas nin sharciyaqaan ah laakiin madaxweynaha aad ugu dhaw oo aan ku qabsaneyn booskiisa sida horey u dhacdey.
Sameynta maxkmadda Dasuuriga ah ayaa Madaxweynuhu doonayaa in haddii loo baahdo u xukunto muddada sanadka ah , Samaynta maxkmadda dasuuriga ah ayaa dooneysa in ay soo marto heerar kala geddisan waxaana horyaala shuruudo laakiin waxaa la doonayo in sida ugu dhakhsiyaha badan loo sameeyo si loogu meel gaaro muddo kooban, Samaynta Maxkmadda dasuuriga ah waxay ahayd waxyaabihii madaxweynuhu ballan qaadey sanadka u horeeya ee maamulkiisa, iyada oo in badan oo shacabka Puntland ay ku doodayaan in maalmo kooban u hasran tahay Madaxweynaha wixii uu hadda ku dhawaaqana ay tahay mid laga lee yahay dano gaar ah.
Xukuumadda oo diidey wax wadahadal ah
Sida mid kamid ah Xisbiyada dhawaan looga dhawaaqey magaalada Bosaso ee MIDNIMO ku baaqey in wadahal deg-deg ah la isugu yimaado si loox aliyo khilaafka Puntland loga ilaaliyo bur-bur laakiin maamulku taas waxa uu ku tilmaamey niman riyoonaya waxaana ay sheegeen in aan wax wada hadal ah la isugu imaaneyn sida HORSEED ka ogaatey mid kamid ah Saraakiisha Madaxtooyada Garowe.
Mucaaraadka Puntland oo qorsheynaya Maamul cusub.
Mid ka mid ah Siyaasiyiinta ka soo horjeeda mudo kororsiga Xukuumaddu ku dhawaaqday ayaa Horseed u sheegay inay wadaan qorshe lagu samaynayo maamul cusub oo Dalka ka arimiya 8 jan, 2013 ilaa odayaashu dhaqanku ka soo xuli doonaan Baarlamaan cusub oo soo doorta Madaxweyne .
“Waxaan wadnaa qorshe lagu dhisayo maamul cusub kaas oo aanu ku dhawaaqi doono 8 Jan, 2013 marka ay dhacdo sharciyada Xukuumada hada xafiiska joogta maamulkaas oo shaqayn doona 8 Jan, 2013 ilaa odayaasha dhaqanku ka soo xulan doonaan Baarlamaan cusub oo soo doorta Xukuumada” Ayuu yiri Siyaasigaas oo ku sugan Gaalkacayo hase yeeshee ka gaabsaday in aan magaciisa la shaacin.
Horseed ayaa weydiisay Siyaasigan sida Dalka ay uga wada arrimin karaan labo maamul maadaama ay Xukuumada hada Xafiiska joogtaa aaminsan tahay in xiligeedu ku egyahay 8 Jan, 2014.
“Aaminsanaanta Xukuumadu waxay noqonaysaa rabitaanka iyada u gaar ah laakiin sharci ahaan waxay jiritaan beelaysaa marka la gaaro 8 Jan, 2013 wakhtigaas wixii ka danbeeyana maahan Xukuumad sharci ah xataa hadii ay Xafiiska isku sii adkayso ” Ayuu yiri siyaasigaasi.
Wuxuu sheegay inay talaabadan u qaadayaan si aanu Dalku isugu dhex yaacin loona waayin Maamul Ku meel gaar ah oo ilaaliya Nidaamka & kala danbayta Dalka si aysan foodo & is dhex yaac u dhicin.
“Talaabadan waxaan u qaadaynaa si aysan Dalka uga dhicin is dhex yaac & kala danbayn la’aan maamulkan aanu ku dhawaaqi doona 8 Jan, 2013 wuxuu noqon doonaa mid ku meel gaar ah oo ay u dhanyihiin dhamaan Gobolada & Beelaha Puntland ujeedada aan ka leenahayna waa inuu sugo kala danbaynta Dalka si aysan u dhicin foodo & qalalaase” Ayuu ku celiyey Siyaasigani.
Wuxuu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo qaabka uu noqon doono maamulka ay ku dhawaaqi doonaan marka la gaaro 8 Jan, 2013.
Ma caddeyn Siyaasigani sharciyadda ay iyaguna u haystaan in ay maamul sameeyaan, waxaana uu ku adkeystey in maamulkii jireyba jiritaan beelayo sidaas darteed ay rajeynayaan in issimadu kala saari doonaan soona dhexgeli doonaan.
Facebook: Shiine Culay Follow on Twitter: @Shiineculay